Udokotela nephupho lakhe ngabamnyama
UFUNA kwande abamnyama emkhakheni wokucwaninga uDkt Ntokozo Mzimela, osebenza esibhedlela iNkosi Albert Luthuli, eThekwini Isithombe: SITHUNYELWE
ZANELE MTHETHWA | March 27, 2020
WAHEHWA ukushoda kwabamnyama abangabacwaningi emkhakheni wezokucwaninga ngeMicrobiology, udokotela obuye aluleke ngokomphefumulo.
UDkt Ntokozo Mzimela owazalelwa oLundi, usebenza emkhakheni weMedical Microbiology esibhedlela iNkosi Albert Luthuli Central, eThekwini. Echaza ngomsebenzi wakhe, uthe uma kunezinsolo zokutheleleka kwegciwane elithize, kuthunyelwa kuyena ukuthi enze ucwaningo.
Emuva kocwaningo kudingeka alethe umbiko oveza ukuthi yimiphi imishanguzo okumele isetshenziswe ukulwa nalelo gciwane.
“Umsebenzi omkhulu wami ukuletha izincomo mayelana nokusetshenziswa kwama-antibiotic ngoba nawo ahlukene. Ngiphinde ngibheke nokuthi kungaliwa kanjani nokubheduka kwezifo ezidalwa amagciwane. Yize ngingekho ethimbeni elicwaninga ngokubheduka kweCoronavirus, ngike ngacwaninga ngeCholera,” kuchaza uDkt Mzimela.
Ngaphambi kokuba kulo msebenzi uDkt Mzimela, uthe wayeyiClinical Advisor ohlelweni lokulwa negciwane lengculaza.
Ngaleso sikhathi umsebenzi wakhe bekuwukuqeqesha abasebenzi bakahulumeni iminyaka emithathu, eqinisekisa nokuthi iyalandelwa imigomo ebekwe ukulwa naleli gciwane. Waphinde waba yingxenye yethimba elicwaninga ngokusetshenziswa kweringi eshuthekwa esithweni sangasese sabesifazane, obekungezinye zezindlela zokunqanda ukubhebhetheka kwegciwane lengculaza.
“Nami ngaqala njengabo bonke odokotela, ngaba nendawo yokwelapha iminyaka emine. Ngabona zisuka nje ukuthi ngeke ngihlale isikhathi eside ngoba ngithanda ukucwaninga nokufunda.
“Ngangithanda umkhakha weGynaecology ngaxakwa ukuthi odokotela badingeka njalo ukubelethisa ezibhedlela,” kusho uDkt Mzimela.
Emuva kokuphothula izifundo zobudokotela e-University of KwaZulu-Natal ngo-2005, uDkt Mzimela waya eMpumalanga.
Wabuyela eThekwini ngo-2012, okuyilapho lwakhula khona uthando lokucwaninga. Ngonyaka odlule uphothule ukuqeqeshwa emkhakheni wePathology and Microbiology kanti useqeqeshelwa iMaster’s kwiMedical Microbiology.
“Okwenza ngibe nogqozi lokufunda ngigogode kwezocwaningo ukuthi basashoda abamnyama. Kunzima nokuphasa kulezi zifundo, okuyikona okulahlisa ithemba.
“Ngaba nenhlanhla yokuthi ngiphase okokuqala. Ngiyafisa ukuthi bande abesifazane kulo mkhakha,” kuchaza uDkt Mzimela.
Uthe akaqedile ukufunda ngoba usafuna nokwenza iPhD, adlulisele nolwazi kwabanye.
Uneminyaka emibili esungule inhlangano i-Unbrekable Souls, athe uhlose ngayo ukuqinisa abanye idolo.
“Ngike ngadlula ezimeni ezingishayile okwenze ngabona ukuthi kubalulekile ukuzinakekela emphefumulweni. Uma usesimeni esikahle ngokomqondo, uyakwazi nokuthatha izinqumo eziphusile. Uma ulimele enhliziyweni, kuthikamezeka yonke ingxenye yempilo yakho,” kusho yena.
Kule nhlangano wenza izithangami lapho eluleka khona ngokomphefumulo, abanezinkinga ezahlukene.
Uphinde akhuthaze nokuzivocavoca athe nakho kunomthelela esimeni somqondo.
UDkt Mzimela owaqeda * -matric eMlazi Comprehensive Technical High, uneziqu zeMaster’s kwiBusiness Administration (MBA) azithola eMancosa ngo-2016.
Uphinde waqeqeshelwa iFirst Line Therapy.
Uke wasebenza nezinhlangano ezizimele emkhakheni wezempilo okubalwa iMedical Research Council neBroadReach.